मनोरञ्जन – Page 927 – Etajakhabar
‘हाउसफुल ४’ मार्फत छिट्टै आउनेछन् अक्षयकुमार
ताजाखबर। 'हाउसफुल ३' ले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गर्ने चलचित्रको सुचिमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल भएको छ । छिट्टै बक्स अफिसमा १०० करोड पुग्नेवाला छ । यसको सफलतापछि यसका निर्माताले छिट्टै 'हाउसफुल ४' बनाउने सोचिरहेका छन् । निर्माता साजिद नाडियाडवालाको यो चलचित्र ३ जुनमा रिलिज भएको थियो । चलचित्रमा अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिज तथा नरगिस फाखरी जस्ता स्टारले अभिनय गर...
मिस एसएलसि पोखराको उपाधि प्रेना पराजुलीलाई
पोखरा, २९ जेठ- पोखरामा शनिवार सम्पन्न तेश्रो मिस एसएलसि पोखरा २०१६ को उपाधि लेकसाइडकी प्रेना पराजुलीले जितेकी छन् । प्रतियोगितामा फष्ट रनरअपमा ललिता पुन मगर र सेकेण्ड रनरअपमा प्रकृती सापकोटाले हात पारे । उनिहरुले अन्य प्रतिस्पर्धिलाई पछि पार्दै उपाधी जितेका हुन् ।
बाटो हिड्नेले हिन्दी गीतलाई नेपालीमा गाएपछि … (भिडियो)
ताजाखबर। सबै उमेरको लागि मनोरञ्जन अपरिहार्य कुरा हो । मनोरञ्जनको लागि मान्छेले धेरै कार्यहरु गर्दै आइरहेको हुन्छ । यस्तै एन.के. टिभि मार्फत प्रसारण हुने मनोरञ्जनात्क कार्यक्रमहरु मध्ये रोडटेन्मेन्टमा यसपटक आफ्नो सबैभन्दा मनपर्ने हिन्दी गितलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर हिन्दी गितकै लयमा नेपालीमा गाउनु पर्ने थियो । उक्त कार्यक्रममा सबै उमेरका व्याक्तिको सहभागिता थियो । स्कूले बच्चा देखि पाका उमेरका मा...
श्रृष्टी र सलोन दर्शकबाट घेरिएपछि … (भिडियो सहित)
ताजाखबर। काठमाण्डौको बालाजुस्थित अष्टनारायण हलमा 'गाजलु' हेरेर निस्किएका दर्शकले आफ्नै अगाडी चलचित्रका कलाकार सलोन बस्नेत देख्दा मन थाम्नै सकेनन् । शुक्रबार रिलिज भएको 'गाजलु' हेर्न पुगेका हजारौँ दर्शकले उनिसँग सेल्फी लिए । सेल्फी लिनेको घुईँचोले एकैछिन ट्राफिक जाम समेत भयो । नायिका श्रृष्टी श्रेष्ठ अर्को शो सुरु हुने बेला आइन् । उनले हल भित्रै पुगेर दर्शकसामु देखिइन् । 'गाजलु' हेर्ने दर्शकको भ...
यसकारण सौगातको आँखा छड्के भयो (भिडियो)
ताजाखबर। नेपाली चलचित्र लुकामारी असार १० गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको छ । चलचित्र ‘लुट’मा एकसाथ काम गरेका कलाकारद्वय सौगात मल्ल र कर्माले यसमा पनि अभिनय गरेका छन् । 'लुकामारी'मा सौगातको एक आँखा छड्के छ । चलचित्रका निर्देशक श्रीराम दाहालले सौगात मल्लको आँखा छड्के हुनुको कारण बताएका छन् । कुराकानीमा उनले सौगातको चरित्र निकै अद्भुत र बिशेष भएकाले अरुभन्दा फरक देखिनै पर्ने भएकाले लुक्स परिवर्तन...
सनमका लागि सारिकाले जे पनि गर्न तयार (भिडियो)
ताजाखबर। मोडल सनम कठायतको लागि सारिकाले जे पनि गर्न तयार भएकी छिन् । यो भाव हालै सार्वजनिक 'म त जन्मे' बोलको गीतको भिडियोको हो । दीपक लिम्बु र हर्षिय आलेको स्वरमा रहेको गीतको भिडियो सनम र सारिकाले अभिनय गरेका छन् । भिडियोका निर्देशक जनक सिंह हुन भने सम्पादक टेकेन्द्र शाह र छायाँकार उत्सव दाहाल हुन् । राजकुमार बगरका शब्द तथा संगीतमा रहेको गीतलाई एभरेष्ट ग्यालरीले बजारमा ल्याएको हो । भिडियो:
टंकले ल्याए रमाइलो पाराको ट्राफिक गीत ‘गुल्टियो झिल्के’ (भिडियो)
‘झिल्केले हाक्छ बाइक हिरो स्टाइलमा रोइकराई गर्दा किन्दे बा ले किस्तामा झिल्केले हाक्छ बाइक हिरो स्टाइलमा ओभरटेक गर्न खोज्छ जुनसुकै भिडमा’ गायक टंक बुढाथोकीले यस्तै–यस्तै शब्द रहेको ट्राफिक गीत ‘गुल्टिीयो झिल्के’ गाएका छन् । ट्राफिक जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले निकालिएको यो गीतको म्युजिक भिडियो शुक्रवार एक कार्यक्रमविच महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डिआईजी प्रकाश अर्यालले सार्वजनिक गरे । ...
देशी लुक्समा प्रियंका
ताजाखबर। बलीउडबाट हलीउडमा इन्ट्रि गरेकी प्रियंका चोपडाको पहिलो भोजपुरी चलचित्र 'बम बम बोल रहा है काशी' दर्शकमाझ रिलिजको तयारीमा छ । हालै यो चलचित्रको प्रचारको लागि प्रियंका देशी अवतारमा पटना पुगिन् । उनि एयरपोर्टबाट नै पीच कलरको कुर्तामा देखिइन् । पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनि अनाकली सूटमा सुन्दर देशी गर्लमा नजर आईन् । प्रियंकाले यो चलचित्रमा अभिनय गरेकी भने होइनन्, उनि निर्माता हुन् । प्रि...
गाजलु प्रिमियरमा अनमोललाई फ्यानले घेरेपछि … (भिडियो सहित)
ताजाखबर। युवास्टार अनमोल केसी तथा पूर्व मिस नेपाल श्रृष्टी श्रेष्ठ अभिनित नेपाली चलचित्र 'गाजलु'को राजधानीमा नेपाल प्रिमियर गरिएको छ । प्रिमियर कार्यक्रममा कर्पोरेट हाउसदेखी चलचित्र क्षेत्रको सहभागिता थियो । चलचित्र सुरु हुनु अगावै कलाकारहरु कुमारी सिनेमा हलमा पुगेका थिए । कार्यक्रममा अनमोल केसी र श्रृष्टी श्रेष्ठ मुख्य आकर्षण बने । अनमोल आउनासाथ मिडिया र फ्यानले घेरेपछि उनि हतार-हतार हल प्रवेश...
बाहिरियो ‘झट्का’ हेर्नुस केकी र केके को रोमान्स भिडियो सहित
काठमाडौँ ।हालकी चर्चित नायिका केकी अधिकारि र मोडेल केके अधिकारीले पहिलो पटक एउटै स्क्रीन शेयर गरेका छन् । यी दुई कलाकारलाई पहिलो पटक एउटै पर्दामा ल्याउने काम गरेकी छिन् गायिका दिपा पन्तले । गायिका पन्तको “झट्का” बोलको गीतको भिडियो सार्बजनिक भएको छ । जसमा शब्द र संगीत राज कुमारको रहेको छ । काठमाडौँमा अवस्थित काठमान्डु फन पार्कमा छायांकन गरिएको यो गीतको म्युजिक भिडियोलाइ कोरियोग्राफर दीपक एम् सिंहले...
Previous 1 … 926 927 928 … 947 Next